nepalicuties: अहिले इन्टरनेट मा भाइरल ले ग..
Posted by: nepalicuties May 15, 2019
अहिले इन्टरनेट मा भाइरल ले गर्दा मानिसहरु लाइ चकित बनाएको हुन्छ कति बेला के हुन्छ भन्ने थाहा नै हुदैन आफुसंग सुन्दरता छ भने रातारात भाइरल पनि भैदो रहेछ तर सुन्दरता हुदैमा मात्र भाइरल नभैने रहेछ भाग्य मा लिएर आउनु पर्दो रहेछ साएद येस्तई भैरहेको हुन्छ आजभोली भाइरल हुन को लागि धेरै समय लाग्दैन १ रात मा संसार भर भाइरल बनेको पनि हामि देख्न सक्छौ ! पछिलो समय सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ता हरु संसार भर नै धेरै छन् भाइरल हुनको लागि पछिल्लो समय फेसबुक र टुईटर जस्ता सामाजिक संजाल बाट धेरै भाइरल भएको देख्न पाइन्छ !
बाँकी तस्बिर तल छ
सामाजिक संजालले पछिल्लो समय गुमनाम मानिसहरुलाई पनि निकै चर्चित बनाइदिने गर्छ । केही समयअघि नेपालकी एक युवती एउटा फोटोका कारण निनकै भाइरल भएकी थिइन् । यस्तै अहिले अर्की एक युवती सामाजिक संजालमा निकै भाइरल भएकी छिन् । यी युवती न कुनै हिरोइन हुन् न कुनै मोडल । उनी सामान्य युवती हुन् । तर उनको सुन्दरताको जादू सामाजिक संजालमा यसरी चल्यो कि उनी रातारात भाइरल भइन् ।
यी युवती दिल्लीकी भएको बताइएको छ । उनको नाम केतिका शर्मा हो । उनको जन्म दिल्लीमै २४ डिसेम्बर १९९५ मा भएको हो । केतिका पछिल्लो समय यति भाइरल भइन् कि इन्स्टाग्राममा उनको फलोअर संख्या एक्कासी बढेको छ । उनलाई केही मोडलिङ एजेन्सीले पनि अफर दिएको बताइएको छ । केतिका इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरिएका फोटोकै कारण भाइरल भएकी हुन् ।
हेरौं तस्बिर हरु